Amathiphu we-Twitter wokumaketha okusebenzayo kwe-Twitter
NgoLwesithathu, Juni 23, 2010 NgeSonto, Okthoba 19, 2014 U-Adam Encane
Lesi sethulo sibe nokubukwa okungaphezu kwama-24,000 kuSlideshare futhi sinolwazi oluningi ngendlela exakile… konke okuhlanganiswe kumazwibela ezinhlamvu eziyi-140 noma ngaphansi. Uzothola ngisho nabalobi abambalwa abavela ku- Martech Zone phakathi lapho, futhi!
Izinhlobonhlobo nokunotha kwalezi zeluleko kuyisivumelwano sangempela samandla we-Twitter njengendlela yokuxhumana. Ungabukeli phansi amandla ale ndlela. Nayi isethulo - Amathiphu ayi-140 e-Twitter:
Uma ufuna imininingwane eyengeziwe yokuthi ukumaketha kwe-Twitter kungasiza kanjani ibhizinisi lakho, khetha ikhophi le- Ukumaketha kwe-Twitter Kwamadummies. Njengalo lonke uchungechunge lwamaDummies, le ncwadi ifaka amasu okuqala nawokuthuthuka wokusebenzisa kahle i-Twitter njengendlela yokuxhumana.
I-PS: UKyle akazange abhale lokhu okuthunyelwe, uDoug wakwenza. UKyle ungumuntu omatasa kodwa uDoug wayefuna ukuqinisekisa ukuthi uthola ukunakwa okumfanele ngesethulo esihle nencwadi emnandi.
Tags: kyle lacyTwitteramathiphu we-twitter
UJun 24, 2010 ngo-6: 09 AM
Siyabonga ngokumemeza! Ngiyakwazisa kakhulu.
UJun 24, 2010 ngo-7: 08 AM
Ngiyakhumbula ngenkathi ucela lezi zeluleko ngonyaka odlule. Ngenkathi eziningi zazo ziyiqiniso, ngicabanga ukuthi uzothola inqwaba yezeluleko ezintsha kulo nyaka.
UJun 30, 2010 ngo-3: 54 AM
Ngithole iqembu lonke labantu abasha abathandekayo engidinga ukubalandela